पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रको योजना : लाउडाका आरोपित नै ‘विज्ञ’ समूहमा – Sancharak
Home > पत्रपत्रिकाबाट > पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रको योजना : लाउडाका आरोपित नै ‘विज्ञ’ समूहमा
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रको योजना : लाउडाका आरोपित नै ‘विज्ञ’ समूहमा
Sancharak .com २४ असार २०७५, आईतवार ०६:३६ July 8, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
असार २४ ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त गरेका छन् ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
लाउडा विमान भाडाका कारण निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो । आफ्नो नियमित क्रुले लाउडा विमान सम्हाल्न नसक्दा निगमले लाउडाको एक सेट पाइलटलाई मासिक २१ लाख डलर तिरेर ल्याउनुपरेको थियो । लाउडा सञ्चालन गर्न ५ सेट पाइलट आवश्यक पर्ने भएकाले निगमलाई मासिक एक करोड डलर भार पर्ने देखिन्थ्यो । क्याबिन क्रुबारे सम्झौतामा कुनै उल्लेख नहुँदा पछि लाउडाले ७ हजार ५ सय डलर मासिक मागदाबी गरेको थियो । त्यस क्रममा जहाजको प्राविधिक निरीक्षणसमेत गरिएको थिएन । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
गास जुटाउन जाँदा लाश बनेर फर्कनुपर्यो !
कांग्रेस कार्यालय सुनसान
काठमाडौं आएपछि डा. केसीको यस्तो अडान
सरकारी ढुकुटी रित्तियो